naAlex musi wa 21-08-13
Chii chinonzi Metaverse？ Uye Izvo zvavanotora chimwe chinhu chitsva muhupenyu hwedu？ Munyika chaiyo, zvinhu zvinoda kuenzanisa kwakawanda uye zvinoshanda-zvakanyanya zvichave nyore, zvichingoda chete kumhanyisa kodhi kupedzisa kudzidziswa, uye fungidziro yenyika ino inoenda zvinopfuura izvo ...
naAlex musi wa 21-08-06
Nhungamiro kuhukuru hweMota Wheel: Zvakakosha chaizvo Kungoisa, akakura matai ako, ndipo paunonyanya kubata mota yako mumugwagwa. Sezvo hupamhi hwetairi hunowedzera, inogona kuvhara yakawanda yemugwagwa pamusoro penzvimbo. Vatyairi vazhinji vanofunga zvishoma nezve saizi yemavhiri avo uye ...
Mheremhere yaimbove matsi zvino yanyaradzwa kuva izwi rimwe "Rayone"
naAlex musi wa 21-07-29
Mheremhere yaimbove matsi zvino yanyaradzwa kuita izwi rimwe "Rayone". Pane marara enguva dzekare, akatanga kuvaka chisingaenzaniswi chiroto chikuru, isu hatidi chete kuva mucherechedzo weChina asiwo kuve mucherechedzo wepasi rose, ndichiri kurangarira moto wekutanga kuhwina ...
Sei vanhu vachisarudza aluminium mavhiri kune mag mavhiri?
naAlex musi wa 21-07-24
Mag mavhiri ari, sezita zvarinoreva, mhando yemota vhiri rakagadzirwa nemagnesium simbi alloy. Kurema kwavo kurema kunovaita vanozivikanwa mukumhanyisa kunyorera uye hunhu hwavo hwekunaka hunovaita vakanakisa mushure mekutengesa michina yevanofarira mota. Vanogona kazhinji kuzivikanwa ne symmetrica yavo ...
Maitiro ekuchenesa alloy mavhiri
naAlex musi wa 21-07-13
Maitiro ekuchenesa chiwanikwa mavhiri chiwanikwa mavhiri ari nyore kwazvo kuwana tsvina. Tinofanira kuchenesa sei alloy mavhiri? Kana iwe ukatenga mota nyowani, mikana ichave iine snazzy seti yemagetsi mavhiri seyakajairwa. Asi idzi dzinopenya (kazhinji) sirivha marimu anogona kukurumidza kutanga kutaridzika grubby, kunyanya nekuda kwekuti ivo vari perfe ...
MAWURE ANOGADZIRISWA SEI?
naAlex musi wa 21-07-09
MAWURE ANOGADZIRISWA SEI? Yakatumirwa musi waChikunguru 9, 2021 NAAlex Gan TAGS: Mushure mekutengesa, Rayone, Rayone Mujaho, Aluminium Alloy Wheels Iyo chaiyo seti yemavhiri ealloy anogona kunyatsoita mota yemunhu uye nekuchinja kutaridzika kunoshamisa. Nesarudzo dzakawanda kwazvo pamusika, zvinoita kuti zvive zvakaoma kusarudza wha ...
Ndeupi Musiyano Pakati peAluminium uye Simbi Mavhiri?
naAlex musi wa 21-07-03
Ndeupi Musiyano Pakati peAluminium uye Simbi Mavhiri? Mavhiri uye marimu zvinogadzirwa nemhando dzinoverengeka dzealloys, kana musanganiswa wesimbi, neakasiyana maitiro ekubata, zvinodiwa zvekuchengetedza uye kumusoro. Heino nhungamiro ipfupi kune maviri makuru mhando dzemota vhiri zvinhu uye nemabatiro azvakasiyana ...
Urarame Kurarama Zuva Nezuva
naAlex musi wa 21-06-25
RAYONE LIVE KUFAMBA NOKUDZIDZISWA KWATSVA KUPISWA musi waChikumi 25, 2021 NAAlex Gan TAGS: A015, DM621,690s, Rayonewheel Nhasi Jenny naWilona vane chigadzirwa chiripo paFacebook, Vakaunza 8 mamodheru akazara, pane mesh dhizaini A015, uye mashanu akataura deisgn's DM621, Jenny naWilona muchidimbu ...
ZVESE-ZVITSVA OR003: Rayone YEMAZUVA 6-LUG KUSVIRA-MUGWAGWA GURU
naAlex musi wa 21-06-21
ZVESE-ZVITSVA OR003: Rayone'S LATEST 6-LUG OFF-ROAD GWAYI RAKANYORWA PAJUNE 21, 2021 NAAlex Gan TAGS: 17 ″, 6-LUG, OR003, OFF-ROAD, SIX-LUG, TRUCK, Rayone, Rayone OFF- ROAD Rayone's-nyowani nyowani 6-Lug Off-Road vhiri, iyo OR003. Iine classical mesh deisgn, iyo OR003 inowanikwa mu5 standard tra ...
Chimwe Chinhu NezveRayone E-commerce Partner
naAlex musi wa 21-06-20
Musi waJune 1 edu e-commerce vadyidzani vakagadzirira kuenda kufekitori kuti vadzidze nezve mavhiri ruzivo, takashanyira kwete chete muchina wedhipatimendi, asiwo dhipatimendi rekupedzisa, uye zvakakodzera kutaura kuti isu tiri kubatanidzwawo muzuva nezuva basa rekutakura department. Nhasi ndichaunza ...
Mukati kana kunze? Nezve vhiri's beadlock dhizaini: Ndezvipi zviri nani kwauri？
naAlex musi wa 21-06-18
Mukati kana kunze? Nezve dhiraivhadhi dhizaini dhizaini: Ndeipi iri nani kwauri？ Wheel beadlock inoshanda, muchokwadi, ndiyo tayi beadlock mhete, kazhinji mumigwagwa yemumigwagwa inogadzirwa nezvinodiwa chaizvo, zvirokwazvo, irowo basa rakanaka mumugwagwa, asi mugwagwa kutyaira kesi nekuti th ...
Kuedza Kuenzanisa Kuyedza
naAlex musi wa 21-05-27
Dynamic Balancing Kuyedza Chii chinonzi Wheel Balancing? Pese paunokwana vhiri idzva kumotokari yako, gungano remavhiri rinofanirwa kuve rakaenzana kuona kuti kunyangwe kuganhwa kuenzana uye kutenderera. Mavhiri nematairi hazvina kumbobvira zvakaenzana huremu hwese kutenderedza - kunyangwe tsinde redombo ...
Musiyano nezvakanaka zvekukanda uye nekugadzira mavhiri
naAlex musi wa 21-05-21
Musiyano nezvakanaka zvekukanda uye nekugadzira mavhiri Vhiri racho rinodanwa kunzi rimu. Nzira yakajairika yekusimudzira mavhiri emota kushandura kune aruminiyamu alloy mavhiri, kana kusimudzira mashandiro emota ane akakura saizi mavhiri, mashandiro uye kutaridzika ndeye ...
naAlex musi wa20-11-02
Mumakore matanhatu, mavhiri aRayone akachinja kubva pamukomana asingazive kuenda kune wechidiki ane mweya wakasimba, uye ngatikurei kubva pane lagard isina mukurumbira kune munhu ane mukurumbira muindasitiri yemavhiri, uye muridzi achiri kupokana neKushinga kwakasimba. Musi waZvita 15, 2014, vhiri rekutanga reRayone repasi raive ...
Maminitsi emusangano wekuitwa kwekubatanidzwa kwemaitiro maviri ekutungamira
Mangwanani eAugust 27, 2020, Jiangxi Rayone mavhiri Technology Co, Ltd. yakaita musangano wekutanga weindasitiri uye ruzivo rwekubatanidza manejimendi mukamuri yemusangano padhorobha rekutanga. Mutevedzeri Director Liu Xiaoyu uye Chikamu Chief Xiong Ying we Yihuang County Bureau ...
Goverana shanduko yekusaina mhemberero
Musi waGumiguru 14, 2020, iyo Fuzhou Enterprise Govana Reform Yekusimudzira Musangano uye Investment-Chikwereti Linkage Kupfuura Chitima Chiitiko (Goverana Reform Kusaina Mhemberero) musangano wakaitirwa zvakaitirwa muFenghuang New Century Grand Hotel. Pamusangano, Zhang Hongxing, mutevedzeri wemunyori weMasipala Party Committe ...